Michelle Obama oo ‘haweeneyda loogu qadarinta badan yahay' ka qaadday Hillary Clinton - BBC News Somali
Michelle Obama oo ‘haweeneyda loogu qadarinta badan yahay' ka qaadday Hillary Clinton
Michelle Obama ayaa saddex jeer oo hore waxa ay kaalinta labaad u gashay Hillary Clinton
Marwadii koobaad ee hore ee waddanka Mareykanka Michelle Obama ayaa waxa ay soo afjartay 17 sanadood oo ay Hillary Clinton aheyd haweeneyda loogu qadarinta badan yahay waddankaasi.
Mrs Clinton, oo horay ugu tartantay madaxtinimada Mareykanka, Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee dalkaasi iyo marwadii hore, ayaa kaalinta saddexaad hoos ugu dhacday codbixinta Gallup ee sanadkiiba mar la qabto, iyadoo kaalinta labaad ay soo gashay haweeneyda TV-ga wararka ka baahisa ee Oprah Winfrey.
Boqoradda Ingiriiska ayaa markii 50-aad waxa ay soo gashay 10-ka qof ee ugu sarreeya codbixinta sida ay Gallup sheegtay.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sanadkii 11-aad ee xiriir ah waxa uu noqday ninka loogu qadarinta badan yahay. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii afraad oo xiriir ah waxa uu soo galay kaalinta labaad.
Codbixinta ayaa waxaa la qabanayay sanadwalba tan iyo 1946 markii laga reebo 1976.
Obama iyo xaaskiisa oo jili doono filim
Obama iyo xaaskiisa oo qoraya buugaag ay malaayiin dollar ku helayaan
Waraaqo ‘Jacayl’ oo Barack Obama u diray gabadh oo la soo bandhigay
1,025 qof ayaa la waydiiyay inay magacaabaan ninka iyo haweeneyda dunidan ku nool ee ay qadarinta weyn u hayaan.
Haweeneyda loogu qadarinta badan yahay
Michelle Obama - 15%
Oprah Winfrey - 5%
Hillary Clinton - 4%
Melania Trump - 4%
Queen Elizabeth II - 2%
Ninka loogu qadarinta badan yahay
Barack Obama - 19%
George W Bush - 2%
Pope Francis - 2%
Mrs Clinton, oo horay u soo noqotay senator xisbiga Dimuqraadiga ah iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Mareykanka 2016-kiina u tartantay Aqalka Cad ayaa kaalinta koobaad ka gashay codbixintan 22 jeer oo ay ku jiraan 17 sanadood oo xiriir ah.
Walow Oprah Winfrey aanay weligeed gelin kaalita koobaad haddana waxa ay kaalinta labaad soo gashay 14 jeer.
Haddii Mr Obama uu kaalinta koobaad soo galo sanadka soo socda waxa uu la siman doonaa madaxweynihii hore Dwight Eisenhower kaas oo biladda ninka loogu qadarinta badan yahay ku guulaystay 12 jeer, Gallup ayaa sidaasi sheegtay.
Mr Trump ayaa ilaa iyo haatan ah mid ka mid ah labada madaxweyne ee aanan biladdan ku guulaystay iyagoo xilka haya, madaxweynaha kale ayaa ahaa Gerald Ford.
Gallup ayaa waxa ay sheegtay in codbixintan la qaaday intii u dhaxaysay 3-12 bisha Diseembar.
Erdogan oo ka jawaabay hadalkii ka careysiiyay ee Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga
Cabsida Faransiiska soo wajahday ee ka dhalatay aflagaadadii 'Nabi Muxamed NNKH'
Daraja ka xayuubintii Saadaq Joon ma loo maray hannaankii sharciga ah?